Naya Bikalpa | फलानो नेतालाई सभापति बनाउनुपर्छ भन्ने तर्क गरे भने वातावरण बिथोल्ने काम हुन्छ - Naya Bikalpa फलानो नेतालाई सभापति बनाउनुपर्छ भन्ने तर्क गरे भने वातावरण बिथोल्ने काम हुन्छ - Naya Bikalpa
फलानो नेतालाई सभापति बनाउनुपर्छ भन्ने तर्क गरे भने वातावरण बिथोल्ने काम हुन्छ
प्रकाशित मिती: २०७८ असार २२, १३: ०१: ४४
त्यसैले आफु केन्द्रीय सदस्यबीच तानातान गर्दै गईरहेको काँग्रेसभित्र रहेको गुटउपगुटबीच तालमेल तथा लन्च मिटिङ्गको पनि निकै चर्चा भईरहेको समयमा हाल महामन्त्री डा. शंशाङ्क कोइराला नजिक रहेका पूर्व सञ्चारमन्त्री एवम् काँग्रेस नेता डा. मिनेन्द्र रिजालसँग हाम्रा विशेष संवाददाताले गरेको कुराकानीको सम्पादीत अंशः
वर्तमान अवस्थामा संसद पुनःस्थापना हुने सम्भावना कति छ, तपाईलाई के लाग्छ ?
जहासम्म मलाई लाग्छ, सम्मानित अदालतले संविधान सम्मत काम गर्छ । राष्ट्रपतिले मिलोमतोमा संविधान विपरित संसद् विघटन गर्नुभयो भनेका छौं, त्यहीअनुसार शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्छ भनेर बहुमतको हस्ताक्षर राष्ट्रपतिलाई पेश गरेको समेत प्रमाण बोकेर हामी अदालतमा गएका छौं । अदालतले फैसला गर्छ, न्याय गर्छ हामीलाई विश्वास छ । तपाई हामीजस्तो सामान्य मान्छेले त अदालतले संविधान सम्मत निर्णय गर्छ ।
धारा ७६(५) भनेको राष्ट्रपतिको विशेष अधिकारको सम्मानित लागि हो र त्यसैले संसद् पुनःस्थापना हुँदैन भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ नि तपाई के भन्नुहुन्छ ?
हिजोको संविधानमा जुनबेला संवैधानिक राजतन्त्र थियो, त्यो बेला पनि राजालाई नभएको विशेष अधिकार अहिलेको राष्ट्रपतिलाई छ भनेर कुन संविधानमा उहाँहरुले पढ्नु भएको हो ? त्यो संविधान नेपालको संविधान चाही होइन । अर्को कुनै संविधान पढेर बहस गरिरहनुभएको छ भने त्यो उहाँहरुले जान्ने कुरा हो । मैले संविधान निर्माण गर्ने कमिटिमा नै काम गरेको हो । म मस्यौदा समितिको कार्यदलमा थिए । वास्तवमा भन्ने हो भने त्यो लेख्ने बेला यो धारा नलेखम भन्ने पक्षमा थिए ।
त्यसोभए अब संसद् पुनःस्थापना हुन्छ अनि अदालतले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउँछ होइन त ?
शेरबहादुर देउवालाई अदालतले प्रधानमन्त्री बनाउने होइन । प्रतिनिधिसभाको बैठक बोलाउने नै माग छ । राष्ट्रपतिले गर्नुपर्ने काम गर्नुभएन । कुनैपनि निकायले गर्नुपर्ने काम गरेन भने त्यो निकायलाई त्यो गर्न लगाउने काम संविधान मार्फत अदालतले गर्ने हो ।
तपाईहरुको माग शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने हो त त्यसोभए ?
संविधानको धारा ७६ को ५ अनुसार बहुमत सांसदहरुले समर्थन गरेको व्यक्तिलाई राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्नुपर्दछ । राष्ट्रपतिलाई स्वविवेक अनुसार काम गर्ने अधिकार छैन । हाम्रो संविधानले राष्ट्रपतिलाई त्यस किसिमको अधिकार प्रयोग गर्ने निकायको रुपमा हेरेको छैन । संविधानभन्दा बाहिर गएर राष्ट्रपतिले काम गर्नुभएको छ ।
त्यसोभए नेपाली काँग्रेसको महाधिवेशन तोकिएको समयमा नै हुन्छ त तपाई के भन्नुहुन्छ ?
महाधिवेशन समयमानै गर्ने हामी सबैको इच्छा छ । कसैले कसैलाई आरोप लगाउनुपर्ने परिस्थिति भने छैन । अहिले मात्रै होइन पहिलेदेखिनै महाधिवेशन हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा हामी छौं । महाधिवेशन गराउने हामी सबैको चाहना छ र चाहनाका बाबजुद पनि केही कठिनाइहरु छन् । पहिलो कठिनाइ त हाम्रो नियन्त्रणमा रहेको विषय कृयाशिल सदस्यताको छानविन गरेर टुङ्गोमा पु¥याउने हो । क्रियाशिल सदस्यताको थुप्रै उजुरीहरु परेका छन् ।
क्रियाशिल सदस्यताको विवादहरुलाई टुङ्गो लगाउनलाई केही मापदण्ड परिमार्जनको काम केही साथीहरुले जिम्मा लिनुभएको थियो । त्रियाशिल सदस्यता छानविन गर्ने समितिमा बसेर त्यही मापदण्डको आधारबाट आवश्यक लचकताका साथ त्यो काम सम्पन्न गर्नुहोला त्यो काम समयमा सम्पन्न गर्ने कुरा पनि कठिनाइपूर्ण छ । हाम्रो नियन्त्रणमा भएको विषय जसबाट समयमा अधिवेशन गर्न कठिनाइ हुनसक्छ । हाम्रो नियन्त्रणभन्दा बाहिर रहेका तिनवटा विषय छन् ।
ति विषयले पनि महाधिवेशन गर्ने कुरालाई प्रभावित गर्न सक्छ । पहिलो कुरा कोरोनाको महामारी, त्यो पहाडतिर यसको संक्रमण फैलिरहेको छ । तराइका जिल्ला र उपत्यकामा केही कम भएपनि पहाडतिर फैलिरहेको यही अवस्थामा रह्यो भने हामीलाई त्यसले पनि एउटा कठिनाइ उत्पन्न गराउँछ । जसरी तराइमा र उपत्यकामा कोरोना संक्रमणको दर घटेको छ, त्यसरी बाँकी सबै ठाउँमा घट्ने बाटोमा गयो भने त्यतातिर अधिवेशन गर्ने कुराको लागि कठिनाइ कम हुन्छ । अहिलेसम्म ठुलाठुला कुरा गर्ने सरकार यतिका दिनसम्म जनताको जीवन जोखिममा हुँदा पनि यो सरकारले रती पनि संवेदनशीलता देखाएको छैन ।
यो एकदम चिन्ताको विषय हो । यो कारणबाट पनि हाम्रो अधिवेशन प्रभावित हुन सक्ला । दोस्रो कुरा अहिले लगातार पानी परेको अवस्था छ । बाढी, पहिरो कुन अवस्थासम्म पुग्छ भन्ने यकिन छैन, यो पनि एउटा चिन्ताको विषय छ किनभने मध्ये वर्षामा हामीले कामहरु सम्पन्न गर्नुपर्ने छ । तेस्रो कुरा चाही के हो भन्दा अदालतको फैसला र त्यस पछाडिको नेपालको राजनीतिले कसरी अगाडि जान्छ, त्यसले पनि हाम्रो अधिवेशनलाई प्रभावित पार्न सक्छ । यि तिनवटा विषय हाम्रो नियन्त्रणभन्दा बाहिर छन् । हामी सबैको निरन्तर प्रयत्न छ कि तोकिएको समयमा महाधिवेशन सम्पन्न र्गे ।
नेपाली काँग्रेस पार्टीको आन्तरिक विवादको कारणले महाधिवेशन समयमा हुँदैन भन्ने कुरा पनि आएको छ नि तपाईलाई के लाग्छ ?
धेरै मान्छेको सभापति हुने इच्छा भयो, तिव्र प्रतिस्पर्धा हुने भयो र होडबाजी हुँदैमा त्यसले महाधिवेशन ढिलो हुने होइन । त्यसैले म बाट त्यो अपेक्षा पनि गरिएको छैन्, त्यसैले मैले एउटा नाम लिएर फलानो नेतालाई सभापति बनाउनुपर्छ भन्ने तर्क गर्न थाले भने झन् वातावरण बिथोल्ने कुरा हुन्छ । त्यसकारण त्यो वातावरण बिथोल्ने काम नगरिकन जिम्मेवारी साथ नै म काम गर्छु ।
२०७८ असार २२, १३: ०१: ४४